Khilaafka u dhaxeeya ciidanka Itoobiya iyo kuwa DFS ee Baardheere oo cirka isku shareeray – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Khilaafka u dhaxeeya ciidanka Itoobiya iyo kuwa DFS ee Baardheere oo cirka isku shareeray
Wararka naga soo gaaraya gobolka Gedo ayaa sheegaya inuu cirka isku sii shareeray khilaafkii u dhaxeeyay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa Itoobiya ee ku sugan magaalada Baardheere.
Ciidamada Itoobiya ee ku sugan magaalada Baardheere ee aan ka midka ahayn kuwa AMISOM oo inta badan awood dheeraad ah adeegsadda ayaa amarro kusoo rogay ciidamada dowladda Soomaaliya ee ku sugan magaaladaas.
Sarkaal ka mid ah ciidanka dowladda Soomaaliya oo lasoo xiriiray warbaahinta Bulshoweyn ayaa u sheegay in ciidamada Itoobiya ay dhibaato aad u weyn ku haayaan ciidamada dowladda Soomaaliya, iyagoo inta badan kahor istaaga howshooda, islamarkaana lacago baad ah ka qaada diyaaradaha ka degga garoonka Baardheere.
“Walaaloow sarkaalka hoggaaminaya ciidanka Itoobiya ee ku sugan Baardheere ayaa dhibaato ku haaya ciidanka Soomaalida ah iyo dadka shacabka ah, wuxuu markasta lacago baad ah ka qaadaa diyaaradaha imaanaya magaaladaas, isagoo dhowr jeer hore dhibaatooyin kala duwan u geystay ciidanka Soomaalida” Sidaas waxaa yiri sarkaal diidday in magaciisa aan warbaahinta u isticmaalno.
Si kastaba ha ahaatee, hadalkaan kasoo yeeray sarkaalkan ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa kusoo beegmaya xilli saraakiisha ciidamada dowladda ay qeylo dhaan u direen dowladda federaalka, si ay arrintaan wax uga qabtaan islamarkaana ay soo fara-gelin ku sameeyaan.